Pleco oo ka socda Borneo | Kalluunka
Pleco oo ka socda Borneo
Kalluunka borneo pleco waa nooc loo yaqaan nuug algae oo leh laba koob oo nuugid ah iyo mid ka mid ah tijaabooyinka ugu caansan. Jidhkiisu wuu jajaban yahay wuxuuna leeyahay afkiisa hoose. Waa kalluun biyo qabow oo aad u adkaysta.
Asal ahaan Bariga Aasiya, waxay leeyihiin awood ay ku beddelaan midabka iyadoo ku xiran hadba biyaha ay la socdaan si ay ula qabsadaan asalka. Badanaa waxay ka yimaadeen bunni-bunni illaa bunni khafiif ah oo leh dhibco aan caadi ahayn jidhkiisa oo dhan ka madow. Oo weliba waxay beddelaan midabkooda iyadoo kuxiran substrate, niyadda, cuntada, heerkulka, iyo tayada biyaha.
Borneo pleco waxay ubaahantahay quraarad balaaran, uguyaraan 80 litir, maadaama ay tahay kalluun dhererkiisu ka badnaan karo 6 cm iyo wuxuu u baahan yahay meel bannaan oo lagu qariyo kuna dhaqaaq xasiloonida iyo dhibaato la’aanta dhanka bannaan sidoo kale waxaad u baahan tahay durdurradeeda si aad ugu noolaato nolol ku filan oo tayo leh.
Ku saabsan dhaqankiisa waa kalluun nabadeedIn kasta oo laga yaabo inay dhibaato ka haysato dhulka kuwa kale oo isku nooc ah, haddana waxaa loo baahan yahay meelo bannaan oo lagu calaamadeeyo mid kasta oo iyaga ka mid ah. Badanaa uma baahna daryeel badan, maadaama tayada biyuhu aysan ahayn, taas oo ay tahay in si wanaagsan loo oksijiyo, loo nadiifiyo, loo sifeeyo oo ay ku yar tahay amooniyamku.
Cuntadooda; Iyagu waa kalluun camiran, waxay quudin doonaan wax kasta taas oo ku dhici karta gunta aquarium-ka, iyo sidoo kale algae, dirxiga dirxiga barafoobay. Waa inaad taxaddartaa markaad quudineyso maxaa yeelay badiyaa lama tartamaan kalluunka intiisa kale waxaadna halis ugu jirtaa inaadan helin cunto ama aad ahaato mid aan firfircooneyn oo ay u dhintaan baahi.
Su taranka ayaa ah mid jilicsan, taasi waa in la yiraahdo, ragga ayaa sameyn doona buulka meesha dhadiggu joogo, ka dib markay ukunta dhigaan waxay dillaaci doonaan inta u dhexeysa 10 ilaa 15 maalmood. Si loo keydiyo shiil waa inaad ku siisaa godad quraaradda ku dhex jira oo ay weheliyaan cuntada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Pleco oo ka socda Borneo
Substrate loogu talagalay dhirta aquarium
Nalalka saxda ah ee ku dhex yaal quraaradda quraaradda